Afghanistan: Warkii hore Mareykanka ee duqynta Kaabul oo war kale ka daba yimid - Bulsho News
Afghanistan: Warkii hore Mareykanka ee duqynta Kaabul oo war kale ka daba yimid
Sawir muujinaya baabuurka burburay iyo burburka hareerihiisa soo gaaray
Mid ka mid ah weeraradii ugu dambeeyay ee dhimashada badnaa ee Mareykanku qaaday intii uu socday dagaalkii 20-ka sano ka socday ee Afghanistan ayaa waxaa ka horyimid baaritaanno lagu sameeyay warbaahinta Mareykanka ugu waawayn.
Wargeysyada New York Times iyo Washington Post ayaa sheegaya in duqeynta uu Mareykanku sheegay in lagu bartilmaameedsaday sarkaal ka tirsan Dowladda Islaamiga ay dhab ahaantii ku dhinteen shaqaale samafal oo ka hawl galayay Kabul.
Waxay sheegeen in caddeyntooda ay wiiqeyso warbixinnada ciidamada Mareykanka ee sheegaya in waxyaabaha qarxa ee gaariga la beegsaday uu sababay qarax labaad.
Pentagon -ka ayaa sheegay inay wali rumaysan yihiin inay ka hortageen “khatar soo fool lehayd”.
Weerarka oo lala beegsaday baabuurka- 29kii Ogosto ayaa waxaa loo isticmaalay gantaal nooca Hellfire ah oo laga soo tuuray diyaarad aan duuliye lahayn wuxuuna dilay dishay 10 qof oo hal qoys ah, oo ay ku jiraan lix carruur ah, sida ay qaraabadu u sheegeen BBC.
Militariga Mareykanka ayaa heegan buuxa ku jiray iyadoo, saddex maalmood ka hor weerarka uu qof ismiidaamiyay uu dilay in ka badan 100 qof oo rayid ah iyo 13 askari oo Mareykan ah meel ka baxsan garoonka diyaaradaha ee Kabul iyadoo muwaadiniinta iyo saraakiisha laga daadgureeyay Afghanistan ka dib markii ay Taliban qabsadeen caasimadda.
Hawlgalkii 20-ka sano ee ciidamada shisheeye wuxuu ku soo dhammaaday duulimaadkii ugu dambeeyay ee Mareykanka 30kii Ogosto.
Warbaahinnada The Times iyo Post ayaa falanqeeyay cadaymaha muuqaalka iyo sawirrada, waxay la hadleen khubaro iyo markhaatiyaal, waxayna labaduba ku soo gabagabeeyeen in caddayntu ay soo jeedinayso in wax qarxa uusan ku jirin gudaha gaariga.
Milatariga Mareykanka ayaa sheegay in aysan garanayn aqoonsiga ninka la bartilmaameedsaday ka hor weerarka balse la rumeysan yahay in uu xiriir la lahaa kooxda dowladda Islaamiga ah faraceeda Afgaanistaan.
Guddoomiyaha Taliyayaasha Guud ee Shaqaalaha, Gen Mark Milley, ayaa xilligaas ku tilmaamay “weerar xaq ah”.
Post iyo Times ayaa xaqiijinaya in bartilmaameedka uu ahaa Ezmarai Ahmadi, oo 43 jir ah, oo u shaqeynayay kooxda gargaarka ee fadhigeedu yahay California, NEI, wuxuuna codsanayey dib u dejin Mareykanka ah.
Wargeysku wuxuu leeyahay waxay daraasad ku sameeyeen muuqaalo amni oo muujinaya in Ahmadi uu soo qaadayo laabtoobyada iyo sidoo kale caagadaha biyaha – maadaama ay biyo yaraan jirtay – taas oo saaxiibkiis uu sheegay inay ahayd maalin caadi ah.
Emal Ahmadi: “Toban qof ayaa halkan ku dhimatay .. oo ay ku jirto gabadhaydu, oo laba sano jir ahayd”
Ahmadi ayaa markii dambe baabuur u kaxeeyay gurigiisii. Howlwadeennada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa la sheegay inay arkeen isagoo la hadlaya nin kale, waxayna go’aansadeen inay duqeeyaan. Laakiin xubnaha qoyska ayaa markaa isu soo ururay. Ilmaha ugu yar ee la dilay wuxuu jiray laba sano.
Madaxa hay’adda NEI, Steven Kwon, ayaa Post u sheegay in hay’adda samafalku leedahay shirkadda wahite sedan ee Toyota.
Wuxuu beeniyay in xarunta ay xiriir la leedahay IS. “Waxaan isku deyeynay inaan dadka caawino, marka maxay tahay sababta aan u haysanayeno wax qarxa oo dadka laayanaya.,” ayuu yiri.
Pentagon -ka ayaa ku dooday in qarax weyn kadib duqeyntii diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay muujisay in waxyaabaha qarxa ay ku jireen gudaha xarunta sedan.
Post iyo Times ayaa sheegaya inay jiraan caddaymo aad u yar oo arrintan ku saabsan.
Post ayaa sawirrada muuqaalka u dirtay khubaro si ay u falanqeeyaan. Mid ka mid ah, oo la yirahdo Ferenc Dalnoki-Veress, ayaa sheegay in aysan aad ugu badnayn in baabuurka ay ku jireen walxaha qarxa. Wuxuu sheegay in uumiga uu kicin karay qarax labaad.
Khabiirka kale oo la yirahdo Brian Castner ayaa sheegay in qaraxa labaad uu u badan yahay “kaliya baabuurka gubanayay ama wax la xiriira gaaska ama saliidda”.
The Times ayaa soo xigatay saddex khubaro oo dhanka hubka ah kuwaa oo tilmaamay inaysan jirin caddeymo la xiriira qaraxa labaad.
Illaa iyo hadda ma aysan bixin warbixin dhammaystiran ama kama dambays ah oo ku saabsan weerarka diyaaradda.
Isaga oo ka jawaabaya wararkii ugu dambeeyay ee warbaahinta, afhayeenka Pentagon-ka John Kirby ayaa sheegay in Taliska Dhexe ee Mareykanka “uu weli wado qiimeynta” weerarka balse “ma jiro ciidan kale oo si adag nooga shaqeeya si aan uga hortagno waxyeelo soo gaarta dadka rayidka ah”, sida ay werisay Agence France-Presse.
“Sida uu sheegay Guddoomiye Milley, weerarka waxa uu ku salaysnaa baaritaan wanaagsan oo ay sameyeen sirdoonka, welina waxaan aaminsanahay inay ka hortagtay khatar ku soo fool lehayd garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan dadkii ku dhex jirayba,” ayuu yiri Mr Kirby.